गायक सिताराम विदेश बाट घर फर्किदा “स्वास्नी पिडित” भए ! - radionrn.com
गायक सिताराम विदेश बाट घर फर्किदा “स्वास्नी पिडित” भए !
काठमाडौं – लोकदोहोरी गायक सिताराम परियारको “स्वास्नी पिडित” वोलको गित सार्वजनिक भएको छ । समय सापक्ष अनि हरितालिका तिजको उपलक्षममा गायक शिभ परियार र गायिका टिका सानुको आवाजमा सजिएको उक्त गित ‘आलाप स्टुडियो’ को युटुब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।
नेपालको परिवेश नियालेर, विदेश गएका दाजुभाइको श्रीमती यसरी नबिग्रियोस् भन्नका निम्ति र सभ्य परिवारसंगै सफल समाज परिकल्पनाको सिर्जना गर्दै गायक सिताराम परियारले यस गीतमा शब्द तथा संगीत स्वयम आफैले भरेका छन् । यस गीतमा गायक शिभ परियार र गायिका टिका सानुको आवाज सुन्न सकिन्छ ।
सो गीतमा गायक गायिका कै टिमले धमाकेदार अभिनय पनि प्रस्तुत गरेका छन् । सुन्दै रमाइल लाग्ने उक्त गीतको दृश्य निर्देशन झलक संगीतमले गरेका हुन् । आफ्ना दर्शकले पहिलेको गीतसंगीत संगै यस गीतलाई पनि माया गरेर साथ दिने गायक सिताराम परियारले अपेक्षा गरेका छन् ।